ဇယားပုံစံများ | တစ်ဦးက Forex ကုန်သွယ်မှုစနစ်စိတ်ကို
category: မော်ကွန်း: ဇယားပုံစံများ
ganifx/ စက်တင်ဘာလ 30, 2017/ ဇယားပုံစံများ/0မှတ်ချက်များ
ganifx/ ဇွန်လ 16, 2017/ ဇယားပုံစံများ/0မှတ်ချက်များ
ခွဲခြားစိစစ်ရေး CHART ပုံစံများ
ganifx/ ဇွန်လ 14, 2017/ ဇယားပုံစံများ/0မှတ်ချက်များ
ဇယားပုံစံများအခြေခံအယူအဆ trendline ကနေဖွဲ့စည်းထားသောဇယားပုံစံဖြစ်ပါသည်, ထောက်ခံမှုခုခံ, နှင့်အခြေခံသဘောတရားများကိုတစ်ဦးပိုမိုရှုပ်ထွေးဗားရှင်းအဖြစ်မှတ်နိုင်ပါသည်. ပုံစံပွောငျး: ဇယားပုံစံများနှစ်ခုအမျိုးအစားခွဲခြားထားပါသည် ( ပြောင်းပြန်ပုံစံများ ) နှင့်ရေရှည်တည်တံ့ပုံစံများသို့မဟုတ်ဆက်လက်ပုံစံများ. အခါပြောင်းပြန်ပုံစံများအပြောင်းအလဲများကိုဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောလမ်းကြောင်းသစ်ညွှန်ပြဆိုလိုသော၎င်း၏အမည်ကိုမှစစ်မှန်သော. အမည်ရ…
RANGKUMAN POLA ပြောင်းပြန်လှန်ဦးခေါင်းနှင့်ပခုံး
ယခင်အပိုင်းမှာတော့ကျနော်တို့ပြီးသားခြေလှမ်းတို့ကအသေးစိတ်အတွက် inverted ဦးခေါင်းနှင့်ပခုံးပုံစံဖွဲ့စည်းရေးခြေလှမ်းကရှင်းပြသည်ပါပြီ. ထို့ပြင်အကျဉ်းချုံးကျနော်တို့ကဦးခေါင်းနှင့်ပခုံးပုံစံအကြောင်းအကျဉ်းချုပ်စေနိုင်သည် , အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းအကျဉ်းချုံး inverted ဌာနမှူးနှင့်ပခုံးပုံစံအသေးစိတ်ရှင်းပြနိုင်ပါတယ် : 1. အဲဒီမှာ3ချိုင့်. 2. အလယ်သို့မဟုတ်အောက်ပိုင်း၏ချိုင့်ဦးခေါင်းဟုခေါ်သည် ( ဦးခေါင်း…
POLA ပြောင်းပြန်ပုံစံများ ( Triple Bottom )
ကျနော်တို့က Triple ဤအခါသမယအပေါ်ငါတို့သည်တလုံးတကြောင်း Triple Bottom သည်အခြားတဖန်ပြောင်းပြန်လှန်ပုံစံများပါဝင်သောဇယားပုံစံ pattrens ဆွေးနွေးရန်လိမ့်မည်ဟုတဖန်ပြောင်းပြန်လှန်ပုံစံကထိပ်ဆုံးမှာရပ်တည်ဆွေးနွေးတင်ပြပြီးနောက်, ပုံစံပွောငျးပွ Triple ထိပ်၏ပြောင်းပြန်အရာဖြစ်ပါသည်. နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. ဤကိစ္စတွင်အတွက် Triple Bottom ဆိုလိုအဖြစ်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော aligned သုံးမှတ်ရှိပါတယ်ဆိုလိုသည် , နှင့်သင်တန်း၏ဤအမှု၌…
POLA ပြောင်းပြန်ပုံစံများ ( Triple ထိပ် )
ကျနော်တို့အဲဒီမှာထောက်ခံမှုနှစ်ခုအချက်များဖြစ်ကြပြီးခုခံအပြိုင်ဖြစ်ကြသည်ကိုဆိုလိုသည်သောပယ်ဖျက်ခံရပုံစံကိုနှစ်ချက်ထိပ်နှင့်နှစ်ချက်အောက်ခြေဆွေးနွေးတင်ပြပြီးနောက်. ဒါကြောင့်ဤအခါသမယအပေါ်ကျနော်တို့ Triple ထိပ်ကြောင်းတဖန်ပြောင်းပြန်လှန်ပုံစံထည့်သွင်းထားတဲ့တဦးတည်းဇယားပုံစံများ pattrens ဆွေးနွေးကြမည်. နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. ဒီ Hali အတွက်အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်အဖြစ်အထက်အရာအပြိုင်သုံးမှတ်ရှိပါတယ်ဆိုလိုနိုင် , နှင့်…
POLA ပြောင်းပြန်ပုံစံများ ( double အောက်ဆုံး )
ကျနော်တို့ကပုံစံပွောငျးသို့မဟုတ်မှတဖန်ပြောင်းပြန်လှန်ပုံစံများကိုနှစ်ချက်ထိပ်ဆွေးနွေးတင်ပြပြီးနောက်, ဒါကြောင့်ယခုကျနော်တို့ဆန့်ကျင်ဘက်ပုံစံကိုနှစ်ချက်အောက်ခြေဖြစ်ပါသည်ဆွေးနွေးကြမည်. နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်အဖြစ်, နှစ်ချက်အောက်ခြေမျဉ်းအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောလုပ်နှစ်ခုကိုမှတ်ရှိပါတယ်ဒီအခြေအနေမှာဆိုလို. နှစ်ချက်ခွတစ်ဦးကဆင်းလမ်းကြောင်းသစ်ပေါ်မှာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်, ပုံမှန်အားဖြင့်မကြာခဏတန်ပြန်လမ်းကြောင်းသစ်ကုန်သည်များအတွက်အသုံးပြုကြောင်းတဖန်ပြောင်းပြန်လှန်ပုံစံဖြစ်ပါသည်. တစ်ဦးအပေါ်နှစ်ချက်အောက်ဆုံး…
TYPE -type Fibonacci နှင့်အသုံးဝင်မှုရှိစေရန်